Oromo News 04.16.21 | KWIT
Akkasuman Governor Reynolds guyyaa har’aa akka gabaasteti maneen barumsa Iowa keessati fayyumaa sammuutif doolara million 11.5 federala irraa sababa Covid-19 Kan ramadamu yoo tau fi qarqaarsa hojii community dhaaf kan ramadamu ta’a. Reynolds akka jetteti qarqaarsa prek-12 baayyisuudhaf corona virus dhiiba sammuu ijoole irrati kan fidu akka xiqqeesu kan qarqaru ta’a.
Manni fayyaa Iowa akka gabaaseti Woodbury County torbaan darbee keessa talaali corona virus kan didu yoo tau kunis Counties dhan 21 kan Iowa keessa jiran keessa talali fudhachuu didan keessa tokko. Kan biraa Northwest Iowa Counties fudhatama akka hin qabne goosisan keessa Crawford, Clay, Lyon, Osceola, fi Sac.
State official akka jedhetti kan mirkanneesu kan mullisu talaali corona virus namni fudhatu xiqqaacha dhufuudha. Itti aanan aana fayyaa Deput Tyler Broch akka jedhetti clinic adhan keessati basin kan bahu talaali kanniin irraa wan taef ammati wanni biraa karaa irraa kaafame jira,
Oromo News 04.15.21